Oge iji wepu ebe a? Wụlite 15-05-2019: Martin Vrijland
Oge iji wepu ebe a? Kwado 15-05-2019
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 13 Ka 2019	• 17 Comments
Ọ bụ afọ ole na ole siri ike na mmetụta nke ndụ m onwe m bụ nnukwu. Ugbu a, m ga-eme mkpebi iji kwụsị ma ọ bụ nọgide. Enweelarị m ọtụtụ ugboro na ịme nyocha na ide ederede abụghị ihe omume ntụrụndụ, kama ọ bụ naanị ọrụ zuru oke. Enwere m kọwara otú mkpọsa mgbochi ahụ megide onye m mebiri aha m ruo n'ókè nke na enweghị m ike ịrụ ọrụ ọ bụla na obodo. Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị òtù na ndị na-enye onyinye ejiriwo na-ekpuchi m ọnụ na ụgwọ m ma 'nye' ebe a na ebe ahụ, ọ naghị adịgide.
Ekwesịrị m ikwubi na ime nnyocha na mgbasa ozi ọha na eze nwekwara mmetụta dị ukwuu. Ọ bụ naanị eziokwu na ọtụtụ ndị anaghịzi ahụ ihe gbasara m n'usoro usoro iheomume ha. Facebook na-enyocha "ebe mmasị gị" wee kpebie ma ị ga-egosi ma ọ bụ na ị gaghị egosipụta ya. Na ọnụ ọgụgụ m na-ahụ otú nke ahụ si enwe mmetụta dị ukwuu. N'ụzọ pụtara na ọ ka nwere ike ịhapụ gị ka ị kwuo ihe ị na-eche ma ọ bụ na-eche, mana na ụda ahụ na-encapsulated. Tụkwasị na nke a, ị na-ahụ ọtụtụ mgbalị ndị ọzọ iji kpọọ ihe dịka 'okwu ịkpọasị' ma ị hụ ìgwè ndị agha na-arụ ọrụ na ụdị mkparịta ụka ọ bụla nke na-edozi ihe niile m dere na mkparịta ụka jupụtara na mgbagwoju anya na ntọala ụgha (dịka ọmụmaatụ site n'iji otu n'ime edemede, mee ya eweputara ya na gburugburu ya). N'agbanyeghị nke ahụ, enwere m n'etiti ndị ọbịa 20 na 30 otu puku ụbọchị.
Ekwesịrị m ịmara na ọtụtụ ndị mmadụ anaghị eche banyere otú usoro mgbasa ozi si eme ka ntụle Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta iji megharia iwu ohuru (lee voorbeeld). Oleezi ihe mere m ga - eji dozie nsogbu ndị a niile ma mee ka ha mata? Ọ dịghị onye ọ bụla nwere mmasị na ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ maara ihe ọ bụla na-eme, ndị mmadụ na-ekpuchi, saa aka ha ma nọgide na-enwe nchegbu kwa ụbọchị.
Ọ dịghị onye ọ bụla, ma ọ dịghị onye ọ bụla, na-abata n'ime ihe. N'ezie enwere ụfọdụ ndị na-eche na ọ bara uru ime mkpesa ma ọ bụ tinye aka na nnupụisi a na-achị achị na-enweghị isi nke iyi uwe odo, ma anyị agaghị agbanwe ụwa na nke ahụ. Ndị ọzọ nwere ike ịkwụ ụgwọ ole na ole n'ebe a ma ọ bụ n'ebe ahụ maka nkwupụta nke ime mmụọ ma ọ bụ na-ekere òkè ná nnọkọ ntụgharị uche, ma ọ bụ nanị mmadụ ole na ole ruo mgbe ọ dịghị onye na-amalite ịtụle ịtụgharị hel na ntụgharị nkọwa nke ndụ. Naanị otu oge ka m na-enweta nzaghachi site n'aka ndị kwụsịrị ọrụ ha nke nyere aka na-edebe usoro. Naanị otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ ka ị nụrụ na ndị mmadụ, dịka ọmụmaatụ, kwụsịrị ịga ije na ntuli aka.
Ọ bụrụ na ịchọta onye na-agụ na ọ bara uru ma dị mkpa iji nọgide na; ọ bụrụ na ị na-eche na ọ dị mkpa ka onye na-agụ ya debe akwụkwọ edemede; ederede nke m na-anọgide na-enyocha mgbasa ozi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mgbe ahụ ọ bụ oge maka igosipụta nke ahụ n'ekpere dị mkpa. Enwekwaghị m ike ịnọ n'ọnọdụ ịda ogbenye ma ghara inwe ike izute ihe ọ bụla. Oge eruola ka ị kwupụta nke ahụ na otu, dịka ị nwere ike ịghọ onye otu De Telegraaf, Netflix, ọwa egwuregwu ma ọ bụ mgbasa ozi ndị ọzọ. M wee jụọ gị: Gini ka ịchọtara bara uru karị? O di nwute, ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ndị òtù na-anọ na ọkwa ugbu a, enweghi m ike ịga n'ihu. Ihe mgbaru ọsọ ya bụ ma ọ dịkarịa ala 500 ndị isi ma ọ bụ otu ya na ndị òtù ọzọ. Site na iri puku kwuru puku ndị a ụbọchị, ị ga-enwe ihe ịga nke ọma.
Ya mere, nke a bụ arịrịọ dị mkpa nye gị. N'ime otu izu, m ga-ekpebi ma m ga-ewepụta ebe nrụọrụ weebụ niile gụnyere Archive offline ma ọ bụ gaa n'ihu. Enwere olileanya n'ebe ị nọ. Daalụ maka ọdịmma gị!
Enwere m onyinye magburu onwe ya maka nkwado taa. Ihe niile a ka ga-emezu, mana nke ahụ anaghị agbanwe eziokwu ahụ na enwere m ịnụ ọkụ n'obi. Maka oge ịbụ ndị ole na ole na-agbakwunyere (ekele maka nke ahụ), nke bụ ihe ijuanya na ị tụlere nnukwu ọnụọgụgụ (ọtụtụ iri puku ndị na-agụ akwụkwọ kwa ụbọchị), mana ihe niile m chọrọ ime. Ekele na akụkụ nke nkwado ahụ. Ozugbo a ga-emezu nkwa ahụ e kwere na nkwa, m ga-ekwukwa banyere ya. Maka oge a, m ga-anọgide na-enwe olileanya na ihe nile ga-adị mma, na m ga-anọgide na-ede akwụkwọ ruo ogologo oge. Ka ọ dị ugbu a, nọgide na-esonye, ​​n'ihi na nkwado gị dị nnọọ mkpa. Ọ gaghị adịrị mma ma ọ bụrụ na onye na-ajụ onwe ya nke ọma nwere ike ịmalite ịnweta ndị òtù kama ịnweta mgbasa ozi mgbasa ozi buru ibu, ị naghị eche?
Kedu ka ọkpụkpụ si bụrụ egwuregwu nke mmegide a na-achịkwa?
Nzọụkwụ ọzọ nchekwa net: Patrick Savalle nkwekọrịta N'ezie site na Café Weltschmerz (ihe nakawa etu esi nke n'ịghọ aghụghọ ule)
Tags: egosi, Martin, offline, nkwụnye, mba n'efu, website
Jord Zentveldt dere, sị:
13 May 2019 na 15: 06
Ma eleghị anya, ọ bụ echiche iji mee ka ndị na-abụghị ndị òtù gị gosipụta isiokwu gị nanị maka ịkwụ ụgwọ nke 10 cents. Nke a na - enyekwu gị ego, ndị na - achọghị ịghọ onye otu nwere ike ikpebiri onwe ha ihe ha nwere 10 cents maka.
13 May 2019 na 22: 33
Echere m na ọ bụghị naanị ịkwụ ụgwọ, kamakwa banyere mbọ ndị mmadụ ga-akwụ maka ụgwọ.
13 May 2019 na 23: 20
Kedu ihe ị pụtara kpọmkwem?
14 May 2019 na 08: 04
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị mmadụ na-ebi ndụ site na usoro ahụ. Ọbụna ndị mmadụ nọ na-emeghe usoro ka na-ebi site na usoro. Ọ bụrụ na ịchọọ ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ chefuo ịkwụ ụgwọ maka ọrụ na usoro (gụnyere ndị isi ụtụ isi), ị nweghị ike iji ọrụ ahụ ma ọ bụ na ị nwere ike ịnweta kotima ịga leta ... na ya niile. A na-eji ndị mmadụ eme ihe a na usoro ihe eji eme ihe maka ndị nwere nkwarụ bụ ọdịda ha.
Mgbe ị na-eji ịntanetị, Martin Vrijland bụ otu n'ime ebe nrụọrụ weebụ (mgbe ụfọdụ) ha na-eleta na nke a na-adịghị akwụ ụgwọ ọ bụla. E nyewo ozi ahụ ma ndị mmadụ na-anọgide na-akpa àgwà dịka usoro a chọrọ n'aka ha. Ọ bụrụ na a ghaghị ịkwụ ụgwọ, ha na-aga na ebe nrụọrụ weebụ ọzọ maka oge oge. Ọ bụ nsogbu dị ukwuu ịnyefe ego ụfọdụ. Echere m na ọtụtụ n'ime ndị a (pasent ole na ole) adịlarị na-adọba akpa ha ma nye gị euro ma ọ bụ karịa ma ọ bụrụ na ha zutere gị na mmadụ.
13 May 2019 na 15: 13
O di nwute, anyi enweghi onye obula n'eme nyocha di nkpa na Netherlands dika gi. Nwee echiche na ọtụtụ anaghị ekwenye na 100% ma ghọta ihe ị na-ede, ọ bụ n'ihi mmesi ike hypnosis nke NLP mgbasa ozi. Ụdị olu a nwere obi ike, dịka ọmụmaatụ, akụkọ RTL na-eme nke ọma.
Oge ọ bụla ị na-akpọ oku na ole na ole ka agbakwunyere, mana ezughị. Ma ha na-achọ iwepụ echiche gị ma jiri ha n'ebe ọzọ ma ọ bụ mee ka ha bụrụ ihe ọchị. Egwuregwu Football ma ọ bụ De Telegraaf, ụdị ọ bụla, Niburu, GTST wdg, nke na-eme ka ha nwee mmetụta uche, nke dị oké mkpa maka ọtụtụ ndị, ozugbo ha kwere na ya n'enweghị obi abụọ.
Ha hụrụ ma jigide ụwa ọhụrụ ndị uweojii na-agbasa. Ọ bụ ya mere mmemme dị otú ahụ dịka ndị uweojii, ndị uweojii na ndị ọrụ nchebe na-eme nke ọma. Naanị ha chọrọ ijikwa na nchebe ụgha. N'ezie, ọ bụ Ụzọ Ntuziaka iji rara mmadụ ibe gị nye ma na-elegide anya dịka ndị omempụ. Inwe obi ụtọ na nke ahụ bụ.
Ọ bụ ihere na ọ na-abịa na. Ụfọdụ ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na nsogbu ahụ ga-akwụsị ya dị ka nke a gbanwere na nke ahụ na-atụ egwu, ị maara ya.
13 May 2019 na 16: 49
Site na nke a, m na-eme ka onyinye m ka ukwuu, ma nke ahụ ezughị.
M na-elegide anya mgbe niile banyere ihe ị tinyere na ebe nrụọrụ weebụ gị.
M na-agụkwa ndị mmadụ ndị ọzọ na Martin bụ onye nzuzu.
Hey Martin, ị bụ onye nzuzu, mana m hụrụ gị n'anya.
Ya mere, oku a na-akpọ ndị enyi gị, ime ihe nzuzu ma ghọọ onye òtù, ọ bụghị nke ahụ siri ike.
13 May 2019 na 17: 24
Ndị mmadụ bụ nanị anụ ụlọ anụmanụ, ha na-etinye euro na igbe nchịkọta maka "ezi ihe" ma nyefee ego na 555 giro.
Ọ ga-ejikọkwa ya na dissonance, ma ọ bụghị m enweghị ike ịkọwa ya.
Enweghị m ike ikwu ọtụtụ ihe banyere ya, ọ bụ ihe dị mwute.
I mere ka ọnọdụ a doo anya n'ihu, o doro anya na ọ bụghị mmadụ nwere mmasị.
Nanị nhọrọ ị hapụrụ bụ itinye mgbidi ịkwụ ụgwọ n'azụ ihe niile gị, ndị mmadụ na-achọ ịkwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na ha nweta ihe na nloghachi, ma ọ bụghị ekele.
chul dere, sị:
13 May 2019 na 22: 28
Ana m agbalị ịghọ onye òtù mana ọ naghị arụ ọrụ. Ọ bụrụ na m ga-enye ozi ịkwụ ụgwọ, ana m enweta ozi nhie. Ị nwere ụzọ dị iche nke m nwere ike isi ghọọ onye òtù?
Ndị ọzọ enwee nsogbu a?
13 May 2019 na 23: 19
Kedu ozi njehie ma ọ bụrụ na m nwere ike ịjụ?
14 May 2019 na 15: 20
Ee, otu ugwo ugwo mebiri tupu a ziga onye zụrụ ya nye onye na-akwụ ụgwọ. Ozi ịkwụ ụgwọ: achọrọ onye ahịa maka ụdị a na-agagharị.
M gbalịrị ịdenye site na iDeal.
14 May 2019 na 18: 06
Ị ga-ahọrọ nhọrọ debit kpọmkwem site na iDeal ma họrọ akụ gị
14 May 2019 na 09: 06
edebanye aha dị ka isi na nke ikpeazụ gara aga, ugbu a kwalite ịzụta! Biko nọrọ! Ndị mmadụ chọrọ nke a nakwa na ọ bụ ihe na-enye ihe ọmụma ma ọ bụrụ na ị na-ekpughe isiokwu, mgbe ahụ, akụkọ akụkọ ahụ ga-enye gị (ma ọ bụ na-enweghị isi) ... Mgbe ahụ, ndị niile gbara m gburugburu bụ ndị na-atụkwasị obi na ntukwasi obi ... ..
Lindy Heijmans dere, sị:
14 May 2019 na 09: 59
Enweela m, ọzọ, mere m otu site na nkwụsị aka. Emere m na afọ gara aga kwa, na-akwụ ụgwọ otu ugboro maka nkwụnye ego ma chọpụta na oge gara aga na ọ dịghị mgbe ọ bụla ọ na-akwụ ụgwọ ... Ugbu a, m na-elekwasị anya n'ihe ndị ka mma. Enwere m mmasị ịgụ isiokwu gị, enweghị ike ime ihe ọ bụla na ihe niile, ma ị ga-achọ ka ị nọgide na-ede akwụkwọ. Mgbe m ka nwere Facebook na-ekwukarị ihe ndị ị na-ekwu, ọ dịghị onye na-agụ ya ... ọ dịkwa njọ .... ya mere gaa n'ihu, ịnyere m nkwado!
14 May 2019 na 12: 00
Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe mere m, a na-akwụ ụgwọ akpaka naanị maka oge 1, mana m bụ onye otu maka ọkara ọnwa isii. M na-elekwasị anya na ya.
N'izu ole na ole gara aga, m mekwara ka ọla kọpa dị obere. Ana m ekele gị ede Martin!
Na ọzọ ọ bụ nanị ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị òtù na-agbakwunyere, gịnị kpatara otu ma ọ bụ 100 ole na ole?
Maka nanị 2 kwa ọnwa ị nwere ike ịghọ onye so na ya, ọ bụrụgodị na ị nọ n'ụlọ akụ nri, ị ka nwere ike ịchọta ya, ma ọ bụ na ọ na-efu ya nke ukwuu na ọ ga-eti gị n'ime akpa gị?
14 May 2019 na 17: 05
ỌTỤTỤ OZI ###
Kedu ka ọ ga - esi mee ya? (Nụ okwu: Grapperhaus na nyocha nke televishọnụ 1ste njikọ) na ezi okwukwe Journalists (PR de V & J vd H) na - akwọ ụgbọala ndị kasị dị oké ọnụ ahịa na MartinVrijland bụ ndị na - emepụta ihe na - nwere ike ịnakọta otu ọnwa maka nkwa ya maka afọ asaa ..
Ọ bụrụ na o kwesịrị 1, ọ bụ nke a na ebe nrụọrụ weebụ a ma gụọ karịsịa na njikọ dị n'okpuru ebe Grapperhaus dabeere, oge anyị na-enyekwu ndị na-eme nnyocha n'eziokwu bụ ndị na-esiteghị na ha ma ọ bụ ndị ọzọ
Mwakpo ọjọọ na ụlọ ọrụ Telegraaf na Panorama nke MartinVrijland gosipụtara, biko
Keyboarde dere, sị:
15 May 2019 na 09: 25
Onyinye oge nyere site PayPal.
Ntakịrị obere mgbalị ma ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ, n'ihi ya ọ dịghị nsogbu.
M na-amụta ọtụtụ ihe site na isiokwu gị, ị na-ahapụ m ka m leba anya n'ihe ndị dị iche iche na ịnwe nyocha dị mma. Ana m ekwukwa ọtụtụ nchegbu gị banyere ọdịnihu.
White oke bekee dere, sị:
15 May 2019 na 22: 51
Nye m ọ na-esiri m ike ịghọ onye na-azụ ihe, ma n'ikpeazụ, m nwere ihe ịga nke ọma.
" Mgbe Thijs H., ụgwọ Edith Schipper maka njide anya, jụrụ na ọchịchị gara aga, onye ọ bụla ga-anabata ya
Ndi oru mgbasa ozi na ndi dere akwukwo ma ha na ere akuko PsyOp dika ha na egosi TV? »
Nleta nile: 12.934.890
Nnupụpụ mkpụ na oku maka ụtụ isi dị elu na ịchịkwa mkpokọta nke ndụ gị
Onye na-ahụ maka mpụga mbipụta Margaret Klein Salamon: "Nzọụkwụ ọzọ bụ ime ka eziokwu ahụ dị adị"
Turkish kpasuru Syria a harbinger maka Europe
Mwepu Mwepu nke ndi n’enye ego kwụrụ ụgwọ
Ihe eji eme ihe ngosi a bu ‘ihe ziri ezi’ na usoro ahia eji nlezianya hazie ịkpa agwa
SandinG op Nnupụpụ mkpụ na oku maka ụtụ isi dị elu na ịchịkwa mkpokọta nke ndụ gị
Marcos op Nnupụpụ mkpụ na oku maka ụtụ isi dị elu na ịchịkwa mkpokọta nke ndụ gị
Amalek op Ọ bụ Ursula von der Leyen (onye isi oche EU n'ọdịnihu) bụ otu ụdị ọbara ahụ dịka ezinụlọ ndị eze Britain?
2 igwefoto op Onye na-ahụ maka mpụga mbipụta Margaret Klein Salamon: "Nzọụkwụ ọzọ bụ ime ka eziokwu ahụ dị adị"
Jikọọ ndị 1.647 ndị ọzọ debanyere aha